किताब | Wagle Street Journal
Category Archives: किताब
गिरीश गिरीको किताब वीरगन्ज
किताबको अावरणमा उल्लेख गरिएअनुसार वीरगन्ज गिरीश गिरीको सहरको कथा हो । वर्णनले अहिलेको नेपालकै हालखबर उतारिदिन्छ र पो यी तीनसय पन्ना सबैले पढ्नुपर्ने दस्तावेज बनेका छन् ।
वीरगन्ज अगि दक्षिण नेपालको यो सानो पुरसँग म खासै परिचित थिइन । कहिलेकाँही समाचार कक्षमा वीरगन्जका पत्रकार र त्यहाँको पत्रकारितालाई त्यो नगरको व्यापारिक हैसियतसँग जोडेर गरिएका विनोदपूर्ण टिप्पणी मैले सुनेको थिएँ । तर नगरको खास महत्वचाहिँ गतवर्ष ठ्याक्कै यति नै बेला अनुभव भयो जब म काठमान्डूमा यताउता निस्कनुपराे कि साइकलमै कुदिहाल्थेँ ।
“देखा, नभन्” तरिका अपनाइएका लेखन प्रस्तुतीहरू विशेष स्वादिला हुन्छन् । कसैले लगाएको लुगा, खाएको खाना, बोलेको लवज र कसैको अनुहार या हातका अौलाहरूको अवस्था इमानदार वर्णन मार्फत शब्दमा उतार्ने काम लेख्नेको । त्यो बखान पढेपछि बनेको मानसिक छविमा अाधारित भएर वर्णितकाबारेमा अवधारणा बनाउने या टुंगोमा पुग्नेकाम पढ्नेको । लेख्नेले नै चक्की पिसेर पढ्नेलाई पियाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यस्तो भयो भने किताब अल्छिलाग्दो हुन्छ । वीरगन्ज मा अधिकाँश ठाउँमा “देखा, नभन्” तरिका प्रयोग भएकैले मलाई यो किताब नौलो, पठनीय र जानकारीमूलक लागेको हो ।
हरेक मानिसको कथा हुन्छ । तर सबैको कथा उत्तिकै रोचक हुँदैन । सबैको कथाले उत्तिकै सशक्त ढंगमा कुनै प्रबृत्ति उजागर गर्न सक्दैन । स्थानको सीमितताले गर्दा कुनै पनि लेखनीमा सचेत ढंगमा त्यस्ता पात्र छानिन्छन् जसमार्फत कुनै विशिष्ट कथा प्रभावकारी ढंगमा भन्न सकियोस् । वीरगन्जलाई “देखाउने” क्रममा गिरीले उतारेका पात्रहरूले नै मलाई यो सहरको कथा भन्छन्, अवस्था बुझाउँछन् । किताबको सवल पक्ष यो भएको मैले ठहर्याएको छु । पात्र चयन र उनीहरूबारेको पूर्वजानकारीमा गिरीको क्षमता झल्किएको छ । पहिले नै परिचित ती पात्रहरूसँग उनले फेरि भेटेकैले वास्तविक चित्र उतार्न उनलाई सजिलो भएको बुझ्न सकिन्छ । त्यसाे गर्दा चित्र थप प्रष्ट पनि भएको छ । प्रतिवेदन सवल भएको छ । सिर्सिया नदीमा धेरै पानी बगिसकेको अवस्थामा वीरगन्जका गिरीलाई “पात्र उही.. परिस्थिति उही” लाग्नु अनाैठाे भएन । तर तिनै पुरानै पात्र र नबदलिएकाे स्थितिलाई उनले पठनीय चित्रण गरेकैले किताबबारे यति लेख्न जाँगर चलेको हो । एउटा अतीव मनपरेको वाक्य यो हो: “वीरगन्जलाई जब अावाजमा वर्णन गर्नुपर्छ, सबैभन्दा अघिल्तिर झुमक ब्यान्ड उभिन पुग्छ ।”
दह्राेढङ्गले चलिरहेका राजनीतिक प्रदर्शनहरूको पृष्ठभूमीमा लेखिएकाले वर्णनको मूलधार अान्दोलनमा लपेटिएकाे छ । त्यसले किताबलाई राजनीतिक पनि बनाएकाे छ । सम्भवत: थप रूचिपूर्ण पनि । गैरराजनीतिक प्रसंग त किताबका ज्यान हुन् । देवताको भूमिका निर्वाह गरेको तथा धीरेन्द्र पछ्याउँदाको क्षण लगायतका थुप्रै रोचक विवरणले भरीएको किताब पढाईको अनुभव रोमान्चक र विनोदपूर्ण भयो ।
काठमान्डूको कैदी: चार्ल्स एलेनको किताब द प्रजनर अफ काठमान्डू । यो किताबबारे मेरो प्रतिक्रियाका लागि फोटोमा क्लिक गर्नुहोस् ।
पोस्तकका सबै कुरासँग सबै पाठक सहमत हुन सक्दैनन् । अस्वाभाविक होइन त्यो । झन् अहिलेको जस्तो सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितिमा ‘नाकाबन्दी सहर’काे एउटा कथासँग सबै सन्तुष्ट र सहमत हुन सक्दैनन् । मलाई के मन परेन ? दुई या तीन ठाउँमा लेखक जब वर्णन गर्न अर्थात उतार्न (“देखाउन”) छाडेर “भन्न” थाल्छन्, मलाई ‘अोहो, त्यसो नगरेको भए हुन्थ्यो’ जस्तो लाग्यो । म त्यसमा कुनै योजनाबद्द खराबी देख्दिन । अाफ्नै ठाउँ सहरको कुरा भएकाले र धादिङ्गे पहाडबाट एक पुस्ताअघि वीरगन्ज झरेका हुनाले लेखक अलि भावुक भएका पनि हुनसक्छन् जसले उनलाई “हैन, यति त भन्छु” भन्ने तहसम्म पुर्याएको पनि हुनसक्छ । तर म एकजना पाठककारूपमा निचोडमा अाफै पुग्न चाहन्थेँ । म अर्कै सारमा पनि अाउथेँ होला । जे पनि हुनसक्थ्यो । इमानदार वर्णन पढेर अाफै टुङ्गो लाउन चाहने म पाठकलाई लेखकको ठहर उचित नलागेको पनि हुनसक्छ । त्यसैले मलाई उनको निधोसँगभन्दा बढी चित्त नबुझेको चाहिँ उनले मलाई निष्कर्ष दिए भन्नेप्रति हो । तर कतिपय पाठकलाई त्यो मन पर्न पनि सक्छ ।
गैरअाख्यान किताबका पात्रहरू स्मरणीय हुनु लेखकको सफलता हो भन्ने मलाई लाग्छ । वीरगन्ज का पात्रहरूले अाफ्ना कथा जोडदारढंगमा भनेका छन् । छोटेलाल र उनको परिस्थितिको त कुरै नगरौं । छोटेलाल मार्फत गिरीले एउटा महत्वपूर्ण प्रबृत्तिको बयान गरेका छन् । छोटेलालको कथामा सामाजिक र राजनीतिक सन्देशहरू छन् । पशुपति रौनियार, विनोद परियार र उत्तमसागर डंगोलले पनि मलाई वीरगन्ज बुझाए । किताब पढ्दा मैले समग्र सहर र क्षेत्रकै एउटा तस्बिर पाएँ जसकाबारेमा म पहिले जानकार थिइन । पोस्तकबाट भरपुर फायदा मिलेको महसुस भयो ।
काठमान्डूको कैदी: चार्ल्स एलेनको किताब द प्रिजनर अफ काठमान्डू बारे मेरो प्रतिक्रिया यहाँ छ ।
यो टुक्रा तपाईँले वेब साईटमै हेरिराख्नु भएको छ भने प्रतिकृया जनाउन मुनिको फारम प्रयोग गर्नुहोला । प्रतिकृया दिन फेसबुक वा ट्विटरमा लग्ड-इन हुनुपर्छ । यो लेख इमेलमा पढिरहुन भएको छ भने प्रतिकृयाका लागि रिप्लाई थिच्नुहोला । यसलाई फेसबुक, ट्विटर अादिमा सेयर गर्न तलका बटन थिच्नुहोला । धन्यवाद ।
This entry was posted in किताब and tagged किताब, वीरगन्ज, books on October 14, 2016 by Dinesh Wagle.
मैले एकजनालाई यो दसैँमा पढ्न दिएका पुस्तकहरू
रक्षा क्षेत्रको एउटा अाधिकारिक पाटोमा काम गर्ने एकजना सा’पलाई यसपालीको दसैँमा पढ्न भनि पाँचवटा किताब उपहार दिएँ । केही सातायता “खै, मेरोलागि किताब छैनन्?” भनि उनले करकर गरिरहेका थिए । उपहारमा मैले पढीसकेका र तत्काल मैसँग भएका केही शीर्षक परेका छन् । यी मध्ये केहीको नाम सुन्दैमा उनले ‘अोहो, खुबै सुनेको तर अहिलेसम्म पढ्न पाएको छैन’ भनि प्रतिकृया दिए । बाँकी, मैले हल्का पृष्ठभूमी बताउदै पढ्न जोडदार सिफारिस गरेका पुस्तक हुन् । यही मौकामा यी किताबारे मेरा ‘दुइ शब्द’ भनिहाल्ने निर्णय गरें ।
सुधीर शर्माको प्रयोगशाला
प्रयोगशाला को सबभन्दा सवल पक्ष, मलाई लागेको, यसमा सामेल सूचना र जानकारी हुन् । तिनलाई जसरी प्रस्तुत र प्रतिवेदन गरिएको छ त्यसले यो किताबलाई सर्वथा पठनीय र रोमाञ्चक बनाएको छ । साथै सरल भाषाले किताबलाई जोकसैले बुझ्ने तुल्याएको छ । गैरअाख्यान लेखनमा कल्पना (द्वयार्थ छैन है!) को पनि सही प्रयोग हुनुपर्छ । अन्यथा त्यो रुखो हुन्छ जसलाई पढ्दा रमाइलो होइन सजाय पाएको अनुभव हुन्छ। पैसा हालेर आफैलाई सजाय दिने मुर्ख्याइँ कसले गर्छ ? गैरअाख्यानमा प्रयोगशाला र अाख्यानमा पल्पसा क्याफे मलाई उस्तै लाग्छन् । क्याफे जस्तै चिरप्रतिष्ठित र पढ्नै पर्ने किताब भएको छ प्रयोगशाला । दुबै अाअाफ्नो क्षेत्रमा मानक बनेका छन् जसलाई भेट्टाउनु या नाघ्नु पुस्तककै लेखकहरूलाई चुनौतीपूर्ण हुने या भएको देखिन्छ ।
केही साता अघि मैले काठमान्डूका दुइजना परिचित युवतीहरूको वार्तालाप संयोगले सुनें । एउटी व्यापारिक क्षेत्रसँग नजिक रहेर काम गर्छिन् त अर्की मानवअधिकारको संसारमा । त्यो क्षण उनीहरूबीच नेपाली राजनीतिबारे कुरा चलिरहेको थियो । पछिल्लीले फ्याट्ट एउटा प्रश्न गरिन् जो म यहाँ उल्लेख गर्दिन । जवाफ निकै लामो, झन्डै पुस्तक अाकारकै हुन्थ्यो । तर अघिल्ली त्यो झन्झट मोल्न तयार थिइनन् । त्यसैले उनले यस्तो सटिक जवाफ दिइन्- “प्रयोगशाला पढ न । सबै छ त्यो किताबमा ।”
माअोवादी अान्दोलनको पृष्ठभूमीमा नेपाल-भारत सम्बन्ध मात्र हैन समग्र नेपाली राजनीति बुझ्न प्रयोगशाला एक ‘अावश्यक पाठ्य’ भएको छ । Continue reading →
This entry was posted in किताब and tagged किताब, books, Goodreads on September 20, 2016 by Dinesh Wagle.